Ukukhangela ukutshisa i-Aluminium Mold kunye ne-RF Induction Heater
Ikhaya / izicelo / Ukutshisa ukunyuka / Induction Ukufudumeza iAluminiyam
Udidi: Ukutshisa ukunyuka tags: ukufudumeza kwe-aluminium, ukufudumeza i-aluminium induction, I-HF yokufudumeza i-aluminium, ukutshisa ii-aluminium, ukutshisa i-aluminium, Inkqubo yokufudumeza i-aluminium, I-RF yokufudumeza i-aluminium
Induction Ukufudumeza iAluminium Umngundo ukukhupha ukutya okubhakiweyo kunye neRF yokungenisa izixhobo
Injongo · I-Heat aluminium isikhombi sekhekhe ukukhupha iimveliso zokutya
Izinto eziphathekayo · Iimbumba zeAluminium 4.5 "(11.4 cm) ububanzi
Ukushisa 302 ° F (150 ° C)
Ukuphindaphinda 65 kHz
Izixhobo ze-DW-HF-60kW, inkqubo yokufudumeza ngaphakathi, ifakwe kwisikhululo sobushushu esikude esiqukethe i-1.0 mF capacitors ezisibhozo ze-8.0 mF
Ikhoyili yokufudumeza induction yenzelwe kwaye yaphuhliswa ngokukodwa kwesi sicelo
Inkqubo Ukujika okuninzi, isikwere se-pancake coil sibonelela ngokufudumeza okusebenzayo kakhulu okunciphisa ixesha lomjikelo kunye nobushushu obuqhutywa ngesikhunta sealuminium. Le coil inokufakwa kwi-Teflon / epoxy edityanisiweyo ukuze kube lula ukuyicoca. Frozen, iimveliso zangaphambi kokubhaka zikwimo yokubumba ikeyiki. Ukubumba
ziyatshiswa njengoko zihamba phantsi kwekhoyili yokufudumeza induction ukukhupha imveliso.
Iziphumo / Izibonelelo · Ukufudumeza ngeniso kukhuselekile kunokufudumeza nge-oveni yokuhambisa umbane. Igrisi evela ekubunjeni ibangela ingozi yomlilo kunye neegesi zenkunkuma ehovini.
· Ngokukhawuleza, ukushisa ngokuchanekileyo kokuchaneka ngexesha lokujikeleza ngokukhawuleza
Ukutshiswa kwe-Induction I-Turbine Fan I-Welding
ukutshisa i-carbon graphite carbon